Lamaane Oo Bollywood-ka Iska Dhax Doorteen iyo Da’Ahaan Sida Ay U kala Weyn Yihiin Qeybta 2-aad - Hablaha Media Network
Lamaane Oo Bollywood-ka Iska Dhax Doorteen iyo Da’Ahaan Sida Ay U kala Weyn Yihiin Qeybta 2-aad
HMN:- Kulanta wacan aqristayaal maanta waxaa idin heynaa maqaalkeena qeybtiisa labaad ee kaga hadlayno lamaanayaasha Bollywood-ka iska Dhax doorteen iyo da’ahaan sida ay u kala weyn yihiin waan qeynta ugu danbeyso.
Ugu horeyn jaceylka kuma xirno da’ahaan guurka wuxuu u dhacaa is fahamka labada qof dhax maro haddaba waxaa jiro jilaayal bollywood-ka oo guursaday qof da’ahaan aad ugu weyn.
Hal dhinac ma aha sheekada waxaa jiro aktaro bollywood-ka caan ka ah oo guursaday atariisho bollywood-ka ka tirsan da’ahaan-na ka weyn.
Tusaale ahaan Dili kumar markuu guursanaayay Saira banu wuxuu ka weynaa 22-sano sido kale Ritiesh Deshmukh wuxuu xaaskiisa Genelia ka weyn yahay 9-sano.
Shalay waxaa ka hadalnay 8-lamaaane maanta kusoo dhawaada 13-kale iyo da’ahaan sida u kala weyn yihiin.
Fadlan hoos kaga bogo 18-Lamaane Oo Bollywood-ka Iska Dhax Doorteen Iyo Da’ahaan Sida U kala Weyn Yihiin Qeybta 2-aad.
F:G Shalay waxaa heynay 18-lamaane markaan baaritaan samaynay waxay noqdeen 21-lamaane fadlan hoos kaga bogo.
9) Dharmendra 13-sano ayuu ka weyn yahay Hema Malini